यौनशक्ति बढाउने मन छ ? यसो गर्नुस् ! | Kendrabindu Nepal Online News
१६ श्रावण २०७६, बिहीबार १४:०४
यौन जीवनको केन्द्र हो । यो विषयमा कसैले खुलेर कुरा गर्छन् भने कसैले भित्रभित्रै कुण्ठा पालेर बस्छन् तर यौनको कल्पना नगरी वा नसोची बस्नसक्ने मानिस बिरलै पाइन्छन् । तसर्थ यो हरेकको चासो, रोमाञ्च अनि चिन्ताको विषय बनेको पाइन्छ ।
जवान वा परिपक्व भएपछि पुरुष हुन् वा महिला, यौनक्रियामा संलग्न हुन लालायित हुने गर्छन् । शरीरको स्पर्श, नजरको हेराइ, कर्णविवरमा मधुर सुनाइ अनि यौनांग घर्षणको चाहना प्रकृतिले नै मानिसको मस्तिष्कमा बीजारोपण गरिदिएको छ । तसर्थ यो विषयलाई स्वच्छ एवं प्राकृतिक तवरले ग्रहण गर्नु नराम्रो होइन, बरु यो त कुण्ठालाई निकास दिने स्वाभाविक मार्ग हो ।
यद्यपि कतिपय अवस्थामा यौनका विषयमा मानसिक तयारी पूर्ण हुन्छ तर शरीरले साथ दिँदैन, कतिपय बेला शरीर र मन दुवैले ठाउँ छोड्छन् । फलस्वरूप्रकृतिप्रदत्त परमानन्दबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थासमृत आइलाग्नसक्छ । त्यसो भए के गर्ने त ?
केही उपाय छन् । खानपानमा सन्तुलन, जीवनशैलीमा सन्तुलन अनि समग्रमा सन्तुलन कायम गरेर यौन जीवनको भरपूर आनन्द उठाउन सकिन्छ । केही त्यस्ता खानेकुरा छन् जसको सेवनले शिथिल भइसकेको यौनशक्तिलाई पुनःजागृत गर्न सहयोग गर्छ । अनि केही त्यस्ता उपाय छन् जजसलाई अँगालेर यौनजीवनको मधुर सन्तुष्टि हासिल गर्न सकिन्छ । ती के हुन् त ? हेरौँ,
यौनशक्ति बढाउने खानेकुराहरू
यौनशक्ति वृद्धि गर्ने अन्य उपायहरू
तनावले हाम्रो हृदयगति बढाउँछ, जसका कारण ब्लडप्रेसर पनि बढ्छ । यसको नकारात्मक प्रभाव यौन जीवनमा पनि पर्छ । तनावबाट बच्नका लागि यसलाई मनमा राख्नुभन्दा आफ्नो पार्टनरसँग कुरा गर्नुहोस् । यसो गर्दा मनको बोझ कम हुनुका साथै पार्टनरसँगको सम्बन्ध पनि बलियो हुन्छ । तनाव कम गर्नका लागि नियमित योग, ध्यान एवं व्यायाम गर्नु आवश्यक छ ।
पर्याप्त सुत्ने र मोटोपन कम गर्ने
यौनेच्छा बढाउन दैनिक आठ घण्टा सुत्नु आवश्यक हुन्छ । तौल नियन्त्रित राख्नु पर्छ, मोटोपनाले पनि यौनेच्छामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैले तौल बढ्न दिनु हुँदैन ।
केही नयाँ गर्ने
प्रायः दम्पती वा प्रेमीप्रेमिकाले यौनसम्पर्क राख्दा एकै किसिमको तरिका पछ्याउने गर्छन् । यसबाट अन्य जीवनशैलीजस्तै यौन पनि एउटा रुटीनजस्तो बोरिङ एवं नीरस हुन्छ । त्यसैले यौनलाई उत्साहित बनाउनका लागि केहि नयाँ ट्राई गर्नुपर्छ । सम्बन्धलाई ताजा बनाउन नयाँ कुराहरूको अति नै आवश्यक हुन्छ ।
अण्डा, खरबुजा, घर्षण, यौनांग, शुक्राणु
Prevसुमेरु अस्पतालद्वारा २ जनाको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण
दुई बालकले चोरे नेपालगञ्जका नौ पसलNext